IFifa necebo lokulamula olukaMaluleka neChiefs
Mthokozisi Mncuseni | March 26, 2020
INHLANGANO eyengamele ibhola emhlabeni iFifa ihlongoza ukubuyekeza omunye wemithetho yayo emqoka ngenhloso yokugwema izinxushunxushu kubadlali nabaqeqeshi abaphelelwa yizinkontileka ngoJuni 30.
Ukumiswa kwemidlalo ngenxa yeCoronavirus kubukeka kuzophazamisa ezivumelwaneni phakathi kwamaqembu nabadlali, ikakhulukazi labo abanezinkontileka zesibambiso. IKaizer Chiefs noGeorge Maluleka, osayine inkontileka yesibambiso kwiMamelodi Sundowns, yibona abafika kuqala emqondweni ngendaba yokuphela kwenkontileka ngoJuni 30, ekubeni kungacaci noma isizini iyobe isiqediwe.
Njengoba kumi yonke into ethinta unobhutshuzwayo emhlabeni ngenxa yokusabalala kwegciwane iCoronavirus, nesizini ye-Absa Premiership kubhekwe ukuthi iphele ngawo uJuni futhi ngasekupheleni kwawo noma ngoJulayi kuya ku-Agasti. Ukube konke kuhambe ngendlela isizini yaseNingizimu Afrika ibizosongwa ngoMeyi 9. Umdlalo wokugcina bekuzoba owamanqamu weNedbank Cup ngoMeyi 23.
Ngeke kusenzeka konke lokho ngenxa yeCoronavirus okuyilapho-ke obekuvela khona imibuzo ngabadlali abaphelelwa yizinkontileka kanjalo nabaqeqeshi. Kuze kube manje iSundowns ayikaqedi noPitso “Jingle” Mosimane ophelelwa yinkontileka ngoJuni 30. Ukube iFifa ayiyikhulumi ngokubuyekeza imithetho yezinkontileka, iSundowns ibizophoqeleka ukuqedela isizini ngaphandle komqeqeshi wayo. Babodwa abebebuza ukuthi uMaluleka yena uzoyiqeda kuphi isizini ngoba naye iyaphela inkontileka yakhe neChiefs ngoJuni 30 ku-2020. Nakumaligi amakhulu emhlabeni iyona indaba esegudwini, okuyiyona futhi imbangela yokuthi kungenelele umengameli weFifa, uGianni Infantino.
“Akekho ongaboni ukuthi umhlaba wonke ubhekene nesimo sezempilo sonke esingakaze sibhekane naso. Ngenxa yalokhu kusemqoka ukuthi sonke ngobuningi bethu sihlangane senze okufanele ukuze siziphephise thina, imindeni yethu nabo bonke abathandi bebhola emhlabeni.
“Ukusebenza ngokuhlangana sihloniphane singabaphathi, yikhona kuphela okuzosheshisa ukuthi siphuma kanjani kule nkinga. Nathi esisebholeni kufanele sihlangane kakhulu sibe nomqondo owodwa ngoba sibhekene nesitha esisodwa. Uma konke sekuqondile sizomemezela ukuthanjiswa (okwesikhashana) kwemithetho ethinta izinkontileka phakathi kwabadlali namaqembu,” usho kanje * -Infantino esitatimendeni seFifa.
Uma lo mthetho wesikhashana uphasa, kuzoba nokukhululeka kwiSundowns ngoMosimane kanti nakwiChiefs indaba kaMaluleka bazokhohlwa ngayo kanjalo nakwamanye amaqembu.